लकडाउनपछिको नेपाली चलचित्र : चुनौती, यथार्थ र सम्भावना - Parichay Network
लकडाउनपछिको नेपाली चलचित्र : चुनौती, यथार्थ र सम्भावना
सन्तोष बस्याल द्वारा	 ७ असार २०७७, आईतवार १४:४१ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वनै आक्रन्त छ । नेपाल समेत यसबाट अछुतो रहन सकेन । नेपालमा बन्दाबन्दी भएको ९० दिन पुगेको छ । सबै क्षेत्र ठप्प छन् । चलचित्र क्षेत्रमा यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ । विस्तारै व्यवसायिक हुँदै गएको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कोरोनाका कारण धक्का पुगेको छ । लयमा फर्किन समय लाग्न सक्छ । यस्तैमा चलचित्र पत्रकार संघ कास्कीको आयोजनामा शनिबार ‘लकडाउन पछिको नेपाली चलचित्र : चुनौती, यथार्थ र सम्भावना’ विषयक विशेष चर्चा भएको छ । कार्यक्रममा चलचित्र निर्देशक अनुप बराल, कलाकार माओत्से गुरुङ र हल सञ्चालक निकेश द्वा सँग पत्रकार अपिल त्रिपाठीले सहजीकरण गरेका थिए । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल, चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी, चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्का, अभिनेत्री तथा निर्माता रेखा थापा, कलाकार दीपकराज गिरीले भिडिओ मार्फत आ—आफ्नो धारणा राखे ।
चलचित्र पत्रकार संघ कास्कीका अध्यक्ष अरुण गिरीको अध्यक्षतामा सामाजिक दुरी कायम गर्दै सम्पन्न भएको कार्यक्रममा कलाकर्मी, पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो ।
‘लकडाउन पछिको नेपाली चलचित्र : चुनौती, यथार्थ र सम्भावना’ का विषयमा राखिएको विचारको सम्पादित अंश :
अनुप बराल (चलचित्र निर्देशक)
कोरोना प्रभावलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । कोरोना कोरोना भनेर डराईरहनुभन्दा यससँगै जुझ्न आवश्यक छ । लकडाउनमा मैले आफुलाई फर्केर हेर्न पाए । आफैलाई पढ्न यो राम्रो अवसर मिल्यो । चलचित्र क्षेत्रलाई अब पहिलेजस्तै माथि उकास्न चुनौती छ । तर चुनौतीको सामाना सबै मिलेर गर्नुपर्छ । यो समयलाई मैले सिर्जनाको रुपमा लिएको छु । पहिले हामी भौतिक सुविधामा बढी रमायौँ । अहिले अध्यात्मिक चिन्तन गर्ने समय मिलेको छ । अब नेपाली चलचित्र मौलिकतामा आधारित हुनुपर्छ । कम लगानीमा त्रियटिभ आइडिया लगाएर चलचित्र निर्माण गर्न सकिन्छ । अध्यारोबाट नयाँ उज्यालो खोज्ने प्रयास हाम्रो हुनुपर्छ । समस्या भयो मात्रै भन्नुभन्दा पनि समस्याको समाधान कसरी गर्ने आत्ममन्थन हुन आवश्यक छ । कोरोना महामारीले चलचित्र क्षेत्रको बजार खुम्चिनुभन्दा पनि अझ विस्तृत भएर जान सक्छ । मानिसको हेर्ने बानीमा विकास भएको छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्र तत्कालै डिजिटल मार्केटिङमा जान असम्भव छ । तर लगानीको सुरक्षा राज्यबाटै हुने हो भने चलचित्रलाई डिजिटल मार्केटिङमा लैजान कुनै समस्या छैन । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा परिवारवाद भन्दा पनि समुहवाद हाबी छ । तर बलिउड जस्तो होइन । बलिउडमा परिवारवाद र समुहवादको मुद्दा पहिले देखिनै पेचिलो बन्दै आएको हो । नेपालमा भर्खरै सुरुवात भएको छ । यो राम्रो कुरा होइन । यस्तो समस्याको सबै मिलेर समाधान गर्न आवश्यक छ ।
माओत्से गुरुङ (कलाकार)
कोरोना महामारीका कारण नेपालमा लकडाउन भयो । लकडाउन भएदेखि नै म घरमा छु । खेतीपातीमा रमाउन थालेको छु । बन्दाबन्दीका कारण आफैलाई बुझ्ने अवसर मिल्यो । चलचित्र क्षेत्रमा कोरोनाले ठूलो असर पारेको छ । कलाकार देखि प्राविधिकहरु यसबाट प्रभावित छन् । तर चुनौतीहरुको सामाना गर्दै चलचित्र क्षेत्रमा परिवर्तनको आवश्यकता देख्छु । समस्यासँगै जुझ्न अब हामी सिक्नुपर्छ । महामारीबाट डराएर होइन सजक भएर हाम्रा क्रियाकलाप अगाडि बढाउन आवश्यक छ । विस्तारै लयमा फर्किनुपर्छ । यो तेरो यो मेरो भन्ने प्रवृति नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा मौलाउँदो छ । आफ्नोपनको भावना जगाउन जरुरी छ । समयसँगै सिकाईमा समेत परिमार्जित हुनुपर्छ । लकडाउपछि नेपाली चलचित्रमा कथाप्रस्तुति, लगानी, प्रचारप्रसार र प्रदर्शनकोशैलीमा परिमार्जित हुने सम्भावना प्रचुर देख्छु ।
निकेश द्वा (हल सञ्चालक)
कोरोना महामारी सुरुभएदेखि नै हलमा यसले प्रभाव पारेको छ । प्रदर्शनका तयारीमा रहेका चलचित्र समेत प्रदर्शन हुन पाएनन् । प्रचारप्रसार गरियो तर प्रदर्शन हुन नपाउँदा निर्मातासँगै हल सञ्चालकलाई समेत मर्का परेको छ । हामीले बैंकबाट कर्जा लिएर हल सञ्चालन गरिरहेका छौ । अहिलेको अवस्थामा आम्दानी केही छैन । बैंकलाई किस्ता बुझाउन समस्या छ । तर के गर्ने ? चुनौती सँगै सामाना गर्नुपर्यो नि होइन र ? बन्दाबन्दीको समयमा राज्यसँग कलाकारहरुको जे माग छ हाम्रो समेत त्यसमा पूर्ण समर्थन छ । राज्यले हलसञ्चालकहरुको लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण मिलाउन आवश्यक छ । हलसञ्चालकहरुको लगानी सुरक्षित भएन भने भोलीका दिनमा चलचित्र प्रदर्शन कसरी गर्ने ? आज लगानी सुरक्षा भयो भने मात्र भोलीलाई सोच्न सकिन्छ होइन र ? बैंकहरुले समेत ब्याज घटाउन आवश्यक छ । करको विषयमा समेत सरकारले सोच्नुपर्छ । डिजिटल मार्केटिङको हकमा नेपालमा लगानीमै समस्या देख्छु । तर भोलीको दिनलाई सोच्न सकिन्छ । आवश्यक चाहिँ छ । सबैले साथ दिए हामी पछाडि हट्ने कुरै भएन । लकडाउनपछिको चलचित्र क्षेत्र कस्तो बनाउने यो हामी सबैमा भर पर्छ । सरकारी निकाय देखि चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले यसबारे सोच्नुपर्छ ।
लकडाउनपछि नेपाली चलचित्र उद्योग क्षेत्रको चुनौती धैरै छ । सबैभन्दा पहिलो चुनौती व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन नै हो । चलचित्र निर्माण भएर रोकिएका चलचित्रहरुलाई कसरी प्रदर्शन गर्ने, चलचित्रहरुको आर्थिक जोखिमलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने भन्ने नै हाम्रो चुनौती रहेको छ । त्यो सँगै लकडाउन पछिको अवस्थामा चलचित्र क्षेत्रको निर्माण कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छ । समग्र कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर विभिन्न कार्यहरु थालिसकेको छ । श्रमजीवी चलचित्र कर्मीहरुलाई राहत मिल्ने खालको कार्यक्रम तर्फ हामी केन्द्रित छौ । चलचित्र क्षेत्रको अबको सम्भावना मौलिक कथावस्तु नै हो । कम लगानीमा मौलिक विषयवस्तु उठान गरी चलचित्र क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन सकिन्छ । मौलिक कथामा आधारित चलचित्र निर्माणमा बोर्डले समेत सहयोग गर्नेछ । चलचित्र विकास बोर्डले नयाँप्रतिभाहरुका लागि विशेष कार्यक्रम गर्नेछ ।
रेखा थापा(अभिनेत्री निर्माता )
लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र पर्यटन र चलचित्र नै हो । लकडाउनले चलचित्र क्षेत्रमा चुनौती भन्दा पनि अवसर सिर्जना गरेको अनुभुति हुन्छ । हिजोको जस्तो पुरानो शैलीमा काम गर्ने भन्दा पनि अब विश्वव्यापी रुपमा नयाँ शैलीमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको पाउँछु । पकृतिलेनै हामीलाई आत्माआलोचना गर्ने समय दिएको छ । चलचित्र क्षेत्र हिजो भन्दा अझ राम्रो हुने सम्भावना म प्रचुर देख्छु ।
सरकारको प्राथमिकतामा चलचित्र क्षेत्र छैन समस्या त हुने नै भो नि । नेपाली चलचित्र क्षेत्र सुरुदेखिनै कठिन मोडमा छ । सीमाना भन्दा संस्कृति ठूलो हो । देश संस्कृतिबाट चिनिन्छ । चलचित्र क्षेत्रमा सरकारको भर गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । त्यसैले अब हामी चलचित्रकर्मीनै मिलेर चुनौतीको सामाना गर्नुपर्नेछ । चलचित्र क्षेत्रमा अर्काको कामको प्रशंसा र सहयोग गर्ने बानीको विकास हुन आवश्यक छ । हामी एउटै परिवारका हौ भन्ने भावना सिर्जित हुन आवश्यक छ । अबको चलचित्र मेकिङ सँगै म्यासेज दिने खालको हुनुपर्छ । मौलिक चलचित्रलाई नै दर्शकले रुचाएका छन् । हामी केन्द्रित नै मौलिकपनमा हुनुपर्छ ।
आकाश अधिकारी (अध्यक्ष, चलचित्र निर्माता संघ )
५० चलचित्र तयार भएर बसेका छन् । त्यसको अलवा सुटिङ सकिएर डेट लिएका चलचित्र २३ देखि २५ वटा सम्म छन् । अहिले १ अरब १५ करोड हाराहारी को लागनी लागिसकेर फ्रेज भएर बसेको अवस्था छ । यो अवस्थामा चलचित्र प्रदर्शन गर्ने कसरी ? यो ठूलो चुनौती छ । रिलिज गर्नका लागि सिनेमा भवन खुल्नुपर्यो । सामाजिक दुरी कायम गर्दै चलचित्र भवन चलाउन समेत असम्भव छ । चुनौतीलाई सहज बनाइदिन राज्यसँग हामीले पटकपटक आग्रह गरेका छौ । समस्या परेको र संवेदनशीलमा चलचित्र क्षेत्रलाई राख्न सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ । चलचित्र क्षेत्रमा लिएको कर्जामा ७५ प्रतिशत मिनाहा गरियोस् । २५ प्रतिशत मात्र लिने व्यवस्था होस् । असार मसान्तसम्म तिर्ने भनिएको करलाई पुष मसान्त सम्म पुर्याइदिन सरकार सँग हाम्रो माग छ । हामी तब मात्रै रिलिजमा जान सक्छौ जब हाम्रो लागेको लागतलाई राज्यले २० प्रतिशत सम्म बेहोर्न सक्छ । यसकालागि चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत सुचना तथा प्रविधि मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा समेत हामीले ध्यानार्कषण गराएका छौ । राज्यले २० प्रतिशत लगानी सुरक्षा गरिदियो भने हामी चलचित्र प्रदर्शन गर्न तयार छौ ।
रविन्द्र खडका ( अध्यक्ष, चलचित्र कलाकार संघ)
लकडाउनका कारण चलचित्र क्षेत्र अप्ठेरो परिस्थितिमा छ । राम्रो प्राविधिक चलचित्र क्षेत्रले गुमाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ । उनीहरुको सुरक्षाका लागि लाग्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु । प्राविधिकको दैनिक जिवनमा सजिलो, सहज वातावरण तय गरी समस्याको समाधान तर्फ जान जरुरी छ । यो विषम् परिस्थितिमा सबै एक हुन आवश्यक छ ।